Konke mayelana ne-jaundice emakati | Amakati kaNoti
Ziyini izimpawu nokwelashwa kwe-jaundice emakati?
UMaria Jose Roldan | | Izifo
Uma uhlala nekati olithandayo, uzofuna ukuthi aphile njalo, kepha iqiniso ukuthi njengomuntu ophilayo, kuyo yonke impilo yakhe angagula ngaphezu kwesisodwa. Yize kunezifo ezibucayi kakhulu kunezinye, lapho esinye sezimpawu zayo kuyi-jaundice kuzodingeka ukhathazeke kakhulu uma kungenzeka.
Ngalokho, Sizochaza konke mayelana ne-jaundice emakati: izimbangela zayo, izimpawu nokuningi. Okokuqala, sizokutshela ukuthi iyini i-bilirubin, ngale ndlela ungaqonda kangcono konke esikuchaza kamuva.
1 Yini i-bilirubin?
2 Kungani i-jaundice ivela emakati?
2.1 Izimpawu ze-jaundice emakati
3 Yini i-jaundice?
4.1 I-jaundice ye-hepatic
4.2 I-jaundice ye-Posthepatic
4.3 I-jaundice engeyona i-hepatic
5 Kwenziwa kanjani ukuxilongwa?
6 Iyini ukwelashwa?
I-Bilirubin ingumkhiqizo owakhiwa lapho ama-eirotrocyte (amaseli abomvu egazi) ehla ekupheleni komjikelezo wabo wempilo (okuyizinsuku eziyi-100) futhi abhujiswa emnkantsheni nasesipilini. Zisuka ekubeni nombala wazo wemvelo ngokubomvu ziye ekubeni ziphuzi, futhi kulapho-ke iba i-bilirruibin.
Kuyinqubo eyinkimbinkimbi lapho i-hemoglobin iqala iguqulwe ibe yi-biliverdin bese iba yi-bilirubin encibilika ngamafutha. Lokhu kukhishwa kungena egazini bese kuya esibindini kanye neprotheyini.
Lapho ifinyelela esibindini, iguqulwa ibe yi-bilirubin ehlanganisiwe bese ihlangana nenyongo.. Njalo lapho i-gallbladder ithululela emathunjini amancane, i-bilirubin encane iyaphuma nenyongo namagciwane. Lokhu kuguqulwa kube izingulube ezijwayelekile: i-stercobilin (enikeza indle umbala onsundu) kanye ne-urobilinogen (enikeza umchamo umbala ophuzi).
Kungani i-jaundice ivela emakati?
Njengoba ukwazile ukubona kumazwana ephuzwini elidlule, umsebenzi wesibindi uyisihluthulelo kuyo yonke inqubo. I-jaundice izovela ekatsheni lapho umzimba wayo ungakwazi ukukhipha i-bilirubin nezinye izinto ze-bile.
Izimpawu ze-jaundice emakati
I-jaundice uqobo lwayo selivele luphawu olukhombisa ukuthi ikati linezinkinga zempilo. Yize kufanele uqaphele ukuthi uphawu olusobala kakhulu lwalesi sifo umbala ophuzi.
Este ukuphuzi kwesikhumba Itholakala emlonyeni, ezindlebeni, nasezindaweni lapho kungenaboya khona futhi isikhumba sekati siyabonakala.
I-jaundice i-pigmentation ephuzi yesikhumba, umchamo, i-serum nezitho ngenxa yokuqongelelwa kombala owaziwa ngokuthi yi-bilirubin egazini noma ezicutshini.. I-Bilirubin yakhiwa lapho amangqamuzana abomvu egazi efinyelela ekupheleni kwempilo yawo, okuthatha cishe izinsuku eziyi-100. Lawa maseli egazi abhujiswa ebuchosheni nasemnkantsheni wethambo, kanti i-bilirubin yakhiwa nge-hemoglobin, eyi-pigment ebanika umbala wayo. Lokhu kukhishwa ekusakazweni futhi kuhambele esibindi kanye neprotheyini.
Esibindi iguqulwa ibe yi-bilirubin ehlanganisiwe futhi igcinwe ku-gallbladder. Njalo lapho i-gallbladder ithululelwa emathunjini amancane, i-bilirubin encane iphuma nezakhi zenyongo. Ekugcineni, nangemva kokusebenza kwamagciwane amaningi, iguqulwa ibe ezinye izingulube: i-stercobilin (umbala wendle) kanye ne-urobilinogen (leyo yomchamo).
Uma kwenzeka kungenxa yokuthi kukhona okungahambi kahle esibindini; Ayikwazi ukufeza umsebenzi wayo futhi ayikwazi ukususa i-bilirubin engenayo. Amaseli wesibindi (ama-hepatocyte) akhipha le pigment ku-bile canaliculi. egijima kwinethiwekhi yeseli, edlulela enyameni.
Ngakolunye uhlangothi, lapho amaseli enesimo esithile se-pathological noma evuvukile futhi i-bilirubin ingakwazi ukudlulela kunethiwekhi ye-bile duct, kulapho i-intrahepatic cholestasis ivela khona.
Ngakho-ke, kwenzeka lapho isibindi asikwazi ukukhipha i-bilirubin. Izimbangela ezivame kakhulu yilezi:
Ukuphazamiseka kwemithambo yegazi
Kwenzeka lapho i-bilirubin iqoqa ngaphandle kwesibindi ngenxa yokuvinjelwa. Izimbangela ezivame kakhulu yilezi:
Neoplasm ku-duodenum namanyikwe
Ukuqhuma komsele wamabhali
I-jaundice engeyona i-hepatic
Kwenzeka lapho kukhiqizwa i-bilirubin eyeqile ukuze isibindi singakwazi ukukhipha i-pigment ngenxa yokonakala kwamaseli abomvu egazi. Izimbangela yilezi:
Ukutheleleka ngegciwane noma amagciwane
Kwenziwa kanjani ukuxilongwa?
Uma usola ukuthi ikati lakho line-jaundice kufanele umyise ngokushesha kudokotela wezilwane. Uma usulapho, uzoba nokuhlolwa ngokomzimba nochungechunge lwezivivinyo, njengokuhlolwa kwegazi noma i-ultrasound. Ngaphezu kwalokho, kanye nomlando wezokwelapha uzokwazi ukwazi ukuthi imbangela bekungaba yini.
Emakati ane-jaundice kulula ukuthola ama-enzyme wesibindi aphakemenoma lokhu kungakhombisi isifo sokuqala noma sesibili se-hepatobiliary. Lokhu kumiswa kuphela kodwa isifundo se-ultrasound ne-radiological sizohlala sidingeka njalo.
Ngisho nangaphambi kwalokhu, umlando wezokwelapha kanye nokuhlolwa okuyisisekelo kuzovumela i-vet ukuthi ithole amaqhuqhuva e-thyroid, uketshezi esiswini (cystitis) futhi wazi futhi ukuthi unalo yini uhlobo lokuchayeka kuzidakamizwa ze-hepatotoxic.
Ngalesi sizathu, i-jaundice iqondwa njengesimpawu ngenxa yezinguquko yingakho ukuthola ukuthi kwenzeka ngempela kuyadingeka ukwenza izivivinyo eziphelele.
Ukwelashwa kuzoya kakhulu ngesizathu, okubheka ukuthi kunezifo eziningi ezethula i-jaundice njengophawu kungaba yinoma yini kusuka ekuphuzeni ama-antibiotic kuya kushintsho ekudleni. Ongasoze wakwenza ukuzenzela imithi yakho ngaphandle kokucela i-vet yakho, ngoba kungenjalo kungabulala.
Sithemba ukuthi ukuthole kuwusizo. Ngale ndlela, ungaba nomuzwa wokuthi ngabe ikati lakho lihlushwa yilesi simo futhi, uma kunjalo, udokotela wezilwane uzokwazi ukumhlola ngokushesha okukhulu ukuthola ukwelashwa okufanele kakhulu kwecala lakhe elithile.
Kunoma ikuphi, manje njengoba wazi ukuthi ziyini izimpawu nokwelashwa kwe-jaundice emakati, wazi okuthe xaxa ukuze ukwazi ukunakekela impilo yekati lakho kangcono.
Indlela ephelele ye-athikili: Amakati kaNoti » Amakati » Izifo » Ziyini izimpawu nokwelashwa kwe-jaundice emakati?
Amagesi emakati: izimbangela nezixazululo
Kungani imilenze yami yangemuva yekati yami yehluleka?
😻 Izaphulelo kokudla kwekati nezinsiza